कात्तिक ४, स्याङ्जा । स्याङ्जाका एक युवा व्यवसायीले दशैं अवधिमा मात्रै खसी बोका विक्रीबाट रू. २२ लाख आम्दानी गरेका छन् ।
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका ७ सिरौंसाका २९ वर्षीय युवा व्यवसायी गंगाधर पाठकले खसीबोका विक्रीबाट उक्त आम्दानी गर्न सफल भएका हुन् ।
‘गणेश बाख्रा फार्म’ मार्फत उनले साना ठूला गरी कुल १८० ओटा खसीबोका विक्री गरेका हुन् । युवा व्यवसायी पाठकले दशैंको अवधिभरीमा ११० ओटा खसी र ७० ओटा बोका विक्री गरेको बताए ।
यहाँ उत्पादन भएका खसीबोकाको खपत काठमाडौं र पोखराका फ्रेस हाउसहरुमा हुने गरेको छ । ‘यहाँ उत्पादन गर्न सकेमात्रै हुन्छ बजारको कुनै समस्या छैन, माग अनुसारको खसीबोका उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं’ उनको भनाइ थियो ।
दशैंको समयमा सबै खसी बोका पोखराका फ्रेस हाउसमा खपत भएको उनले बताए । ‘मेरो व्यक्तिगत फार्ममा उत्पादन भएका खसी बोकासहित गाउँका किसानका खसीबोका पनि खरीद गर्ने गरेको छु’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा उत्पादन भएका खसी बोका मेरै फार्ममार्फत विक्री गर्ने गरेको छु जसले गर्दा किसान र व्यापारीहरु दुवैलाई सहजता भएको छ ।’
किसानले उत्पादन गरेको खसी बोकाले सहजै बजार पाउने र व्यवसायीले एकैठाउँबाट निरन्तर ठूलो परिमाणमा खसीबोका प्राप्त गर्ने भएपछि बजारको समस्या नभएको उनले बताए ।
थोरै उत्पादन हुँदा विक्री गर्नका लागि समस्या हुने र बजार मूल्य पनि राम्रो नपाइने भएकाले एकैठाउँबाट विक्री गर्न थालेको उनले बताए ।
व्यवसाय सञ्चालन गरेसँगै उनले बढीमा रू. दुई करोडसम्मको कारोबार गरेका थिए भने थोरैमा बन्दाबन्दीका कारण गतवर्ष रू. ८० लाख बराबरको कारोबार गरेका थिए ।
यहाँ उत्पादन भएका खसीबोका तथा पाठा विक्रीका लागि अहिले कुनै समस्या नभएको उनले बताए । युवा व्यवसायी पाठकले खाडीसहित भारतका विभिन्न कम्पनीमा करीब आठ वर्ष पसिना बगाएर स्वदेश फर्किएर यो पेशा थालेका हुन् ।